आशावादी को हो?
हामी सबै फरक छौं: उत्साहित र उदास, स्मार्ट र धेरै निराशावादी र आशावादी छैन। तिनीहरू भन्छन् कि उत्तीर्ण जीवन बिताउन सजिलो छ, किनभने तिनीहरू जीवनमा मात्र सकारात्मक पक्षहरू हेर्छन्। तर यो हो, र वास्तवमा यस्तो आशावादी को हो, यो अनुसन्धानको लायक छ। यस्तो व्यक्तिको विशेषताहरू बुझ्न, यो "आशावाद" धेरै शब्दहरू बदल्न आवश्यक छ।
"आशावादी" शब्द को अर्थ
ईटाइमोलोजिकल डिक्शनरीको अनुसार, "आशावाद" शब्द लैटिन अनुकूलनबाट प्राप्त गरिएको छ - "राम्रो, उत्तम"। यसैले, "आशावादी" शब्द को अर्थ एक विशेष मामला को सर्वश्रेष्ठ परिणाम मा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो।
यो उल्लेखनीय छ कि आशावादीहरू "व्यक्तिमा एक व्यक्ति" होइनन् जुन हरेक समय मुस्कान गर्न सक्दैनन्, जीवनको आनन्द उठाउँछन् र जीवनका समस्याहरूमा ध्यान नदिईन्छ। मनोवैज्ञानिकहरूले भने कि दुई प्रकारका आशावादीहरू छन्: तर्कसंगत र अपमानजनक। पछि पछि सुरू गरौं।
अनैतिक र व्यावहारिक आशावादी
एक अप्रासंगिक आशावादी को अवस्थित अवस्था को विश्लेषण को लागि उपेक्षा को विशेषता हो: उनको मानिन्छ कि यदि केहि नहीं गरे पनि, सबै केहि सिर्फ ठीक हुनेछ, र समस्याहरु स्वयं द्वारा हल गरिनेछ।
एक तर्कसंगत आशावादी जस्तो छैन। उनीहरूले कुनै पनि गाह्रो परिस्थितिमा पनि विश्लेषण गरेका छन्, जुन यो यथार्थवादीको रूपमा काम गर्दछ, र भविष्यमा उनीहरु बाट यो तरिकाहरु खोज्छ र विश्वास छ कि उसले यसलाई पत्ता लगाउँदछ र सुरक्षित रुपमा समस्या उत्पन्न गर्दछ। उहाँले जीवन, आतंकको बारेमा उजुरी गर्नुहुन्न; त्यो निराश हुनेछ, तर किनकि उनी जीवनमा सबै कुरा मन पराउँछन्, तर किनकि उनी एक्शनका लागि तयार छन्।
आशावादी व्यक्ति हो भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यो एक निश्चित व्यवहारद्वारा विशेषता हो:
यो व्यक्ति उत्तमको लागि आशा गर्दछ र घटनाहरूको सकारात्मक परिणाममा विश्वास गर्दछ;
उहाँसँग एक विश्लेषणात्मक दिमाग र मानसिक संतुलन छ।
एक नियमको रूपमा, आशावादीहरूले सुसमाचारका मनोवैज्ञानिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् - जो सकारात्मक, सक्रिय, सचेत-आधारित हुन्छन्;
तिनीहरू आफ्नो हातहरू सबै भन्दा कठिन जीवन परिस्थितिमा पनि हराउँदैनन्, जबकि तिनीहरूले "वायु तालाहरू" निर्माण गर्दैनन् र उनीहरूको अपमानजनक उत्साह देखाउँदैन जहाँ यो अनुपयुक्त छ।
के यो आशावादी हुन राम्रो छ?
सायद, यो प्रश्नको कुनै असम्भव जवाफ छैन। तर यदि तपाइँ यस प्रकारको सबै कार्य र विचारहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने, तपाईं निष्कर्षमा आउन सक्नुहुन्छ कि एक आशावादी राम्रो छ। सबै पछि, उहाँले गुलाबी रङ चश्मा मार्फत जीवनको नजर गुमाउनु भएको छैन, सबै भन्दा कठिन परिस्थितिहरुमा आत्माको उपस्थिति गुमाउनु हुँदैन। उहाँ एक भित्ता हुनुहुन्न, यद्यपि उहाँसँग संदेह छ। नसोच्नुहोस् कि उनीहरूलाई कहिल्यै आवश्यक पर्दैन, तर यदि यसले यसलाई पाउँछ भने, उनी आभारी हुनेछन्, र यदि त्यहाँ विफलता छ भने उसले आफ्नो हात र हार्बर असमानता वा क्रोधलाई कम गर्नेछैन, तर परिस्थितिबाट अन्य तरिकाहरू खोज्नेछ।
Winnie Po को बारे मा कार्टूनबाट गन्दा सम्झनुहोस्, जो यसो भन्छिन्: "अझै पनि सक्दैन ...", केवल सहनशीलता र भाडा क्यूबको आशावादलाई बुझाउँछ? त्यसोभए, हुनसक्छ, आशावाद एक सहज गुणस्तर हो, वा तपाइँ अझ अझै सिक्न सक्नुहुन्छ कि एक विशेषज्ञ सल्लाह प्रयोग गर्ने आशावादी हुन कसरी।
शराब देखि कोडिंग को प्रकार
Cyclotymia - यो के हो, लक्षण र उपचार
हलबर्ड टोन स्केल
खराब बानीहरूबाट छुटकारा पाउन कसरी?
दर्पणमा तपाईंको प्रतिबिम्ब कसरी प्रेम गर्ने?
कसरी खाद्य लतबाट छुटकारा पाउनु हुन्छ?
फोबिया - मान्छेहरूको डर
नामको व्यक्तिको चरित्र
आत्म-विनाशको लागि प्रचार
महिलाहरु मा चिन्ता र आक्रामकता
फोबिया - मकवानहरूको डर
यूरिया संग फुटबल
चिकन बखवाटको साथ भरिएको - ओवन व्यंजनहरूमा पकाइएको सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जनहरू
पनीर संग बेक्ड पास्ता
गहुँ रडप कसरी पकाउने?
Yudashkin - संग्रह 2014
चार्जिज थेरोनले छाला मिनी-स्कर्ट पहिरन थाले
महिला खेलकुद टोपी
बुढो गर्मीको स्कर्ट
माइल कुनिसले आफ्नो छोराको नाम मन परेनन्, आशटन कुचेरले आविष्कार गरे
हेपिन मल - प्रयोग गर्ने तरिकाहरू तपाईलाई थाहा छ
पतिको मृत्यु कसरी जीवित रहने?
फ्राइङ प्यानमा कसरी म्याकरेल पकाउने?
मूल स्थान को बारे मा 20 मनोरंजक सिद्धान्तहरु र अटलांटिस को मृत्यु को बारे मा, जसलाई तपाईंले सुनेको छैन!
स्तनपान गर्दा पर्वत
हाउथर्न - उपयोगी गुण र विनाशकारी